China Fibreglass Direct Roving ifektri kanye nabaphakeli | Yuniu
I-fiberglass Direct Roving
Imicu ye-fiberglass eqoshiwe Mat
Needle fiberglass Mat
Iteyipu yokunamathela uqobo
Ingilazi ye-fiber fiber fiber ye-fiberglass bar
Imicu Yokukhiqiza IMisa yengilazi eqoshiwe
100 gsm / 160gsm i-fiberglass Mesh
Heat-nemithi Glass fibre Nokwelukiweyo zulazulile nge high ...
I-fiberglass Emulsion e ingilazi yengilazi yefayibha mat 450
I-1200Tex 2400Tex i-Fiberglass eqondile isuka eChina
Fiberglass zulazula fiberglass ntambo
I-fiberglass itheyiphu yokunamathela
IMisa Production 110g 18x14mesh iwindi anezikhala emnyango
I-Factory Supply Alkali Resistant / ar fiber Glass Roving yenzelwe izinqubo ze-filament emazombezombe kanye ne-pultrusion, ehambisana nama-epoxy resins, ne-ejenti ephulukisayo ye-acid angydride noma i-amine.
Imikhiqizo eqediwe ingahlangabezana nesicelo samandla esikhulu sokuqhuma, esifanele amapayipi okucindezela okuphezulu neziqukathi zengcindezi
Yini imikhiqizo yethu ye-fiberglass ehamba phambili nezinzuzo
Ukusebenza okuqoshwe kahle, ukusatshalaliswa okuhle, i-anti-static nokuhamba kahle okuhle ngaphansi komshini wesikhunta;
Ijubane le-acetone lesisombululo elihlukile ngokusho kwezicelo ezahlukahlukene;
Izinto eziyinhlanganisela zinamandla amakhulu emishini, ukusebenza kahle komhlaba;
Ukusebenza okumanzi okulula, ukusebenza kagesi (ukwahlukanisa) kunamandla.
Into UMBHALO Ububanzi (um) I-LOI (%) I-Mol (%) I-Resin ehambisanayo
Fibreglass ezizulazulayo 2000-4800 22-24 0.40-0.70 .100.10 Phezulu
Fibreglass ezizulazulayo 300-1200 13-17 0.40-0.70 .100.10 UP UP VE EP
Fibreglass ezizulazulayo 300-4800 13-24 0.40-0.70 .100.10 UP UP VE EP
Fibreglass ezizulazulayo 300-2400 13-24 0.35-0.55 .100.10 UP UP VE EP PF
Ukungezwani kwe-1.Even, ukusebenza okuhle kakhulu okuqoshiwe nokusakazeka, ikhono lokugeleza okuhle ngaphansi komshini wokucindezela.
2.Fast futhi ephelele wet-out.
I-static ephansi, ayikho i-fuzz.
Amandla 4.High mechanical.
Imikhiqizo eqediwe ingahlangabezana namandla aqhekezayo e-skyscraping futhi ibekezelele isicelo sokukhathala, esifanelekile
yamapayipi anomfutho ophakeme neziqukathi zengcindezi nochungechunge lwe-tube efakwe ngumoya namandla aphezulu / aphansi ku-eletric
inkambu. Kabanzi itende isigxobo, zu iminyango namawindi njll
Iroli ngayinye icishe ibe yi-18KG, imiqulu engama-48/64 ithreyi, ama-rolls angama-48 ayizitezi ezintathu futhi ama-roll angu-64 ayizitezi ezine. Isitsha esingamamitha angu-20 siphethe cishe amathani angama-22.
Ukuthumela: ngolwandle noma ngendiza
Ukulethwa Kwemininingwane: Izinsuku eziyi-15-20 ngemuva kokuthola inkokhelo ngaphambi kwesikhathi njalonjalo.
Q1: Ingabe uyimboni? Utholakalaphi?
I-Q2: Yini i-MOQ?
A: Ngokuvamile 1 Ton
I-Q3: Iphakheji nokuhambisa.
A: Iphakethe elijwayelekile: ibhokisi (Kufakiwe kunani lokuhlanganisa)
Iphakheji Ekhethekile: udinga ukukhokhisa ngokuya ngesimo sangempela.
Ukuthumela okujwayelekile: ukudluliswa kwakho kwe-Freight okuphakanyisiwe.
Q4: Nginganikela nini?
A: Sivame ukucaphuna kungakapheli amahora angama-24 ngemuva kokuthola umbuzo wakho. Uma uphuthuma kakhulu ukuthola intengo pls sishayele noma usitshele ku-imeyili yakho, ukuze sikwazi ukukuphendula kuqala.
Q5: Uyikhokhisa kanjani imali yesampula?
A: Uma udinga amasampula kusitoko sethu, singakunika mahhala, kepha udinga ukukhokha imali yezimpahla.Uma udinga usayizi okhethekile, Sizokhokhisa imali yokwenza isampula ebuyiswayo uma ufaka i-oda .
Q6: Sithini isikhathi sakho sokulethwa komkhiqizo?
A: Uma sinesitoko, ukulethwa kungahamba ngezinsuku eziyi-7; uma ngaphandle kwesitoko, udinga izinsuku ezingu-7 ~ 15!
Ukukhiqiza kwe-YuNiu fiberglass
Impumelelo yakho ibhizinisi lethu!
Noma yimiphi imibuzo, sicela uxhumane nathi ngokukhululekile.
Langaphambilini I-fiberglass itheyiphu yokunamathela
Olandelayo: Fiberglass zulazula fiberglass ntambo
1200Tex 2400Tex Fibreglass ngqo uzulazula Kusuka C ...
Ukwakha A, Zijingguandi, Qiaodong District, Xingtai Idolobha, Isifundazwe Hebei